တရုတ်နိုင်ငံထုတ်အရည်အသွေးမြင့်4Li -ion 18650 ဘက်ထရီ Holder PC Pins များထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
PC Pins များနှင့် Li-ion 18650 ဘက်ထရီ Holder ၄ လုံး
PC pin များပါသော Li-ion 18650 Battery Holder ၄ လုံးသည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျနှင့်ကာကွယ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤ4Li-ion 18650 Battery Holder သည် PC pins များနှင့် 3.7V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောစက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
PC pin များနှင့် Li-ion 18650 Battery Holder ၄ လုံး၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
PC pin များပါသောဤ4Li-ion 18650 Battery Holder သည် 3.7V ဘက်ထရီလေးလုံးကိုထိန်းထားနိုင်သည်။ ဘက်ထရီသည် ၃.၇ V ဗို့အားထုတ်ပေးနိုင်ပြီး laptop ကိုမီတာ၊ ကြိုးမဲ့ walkie-walkie၊ စတီရီယိုအသုံးအဆောင်များ၊ မော်ဒယ်လေယာဉ်ပျံ၊ ကစားစရာများ၊ ဗီဒီယိုကင်မရာစသည်ဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ Keyu အမှတ်တံဆိပ်4Li-ion 18650 Battery Holder PC pins များကို ၁၀၀% ကောင်းသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုသုံးပစ္စည်းများနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
PC pin များနှင့်4Li-ion 18650 Battery Holder ၏ Product Parameter (Specification) ၂ ခု
ထုတ်ကုန်အမည် PC pin များနှင့် Li-ion 18650 Battery Holder ၄ လုံး
PC တံများနှင့်4Li-ion 18650 Battery Holder ၄ လုံး၏ Product Feature နှင့် Application ကိုသုံးပါ
1. ဤ4Li-ion 18650 Battery Holder ကို PC pins များဖြင့် 3.7V battery output သို့ထုတ်ပေးနိုင်သည်
PC pin များနှင့်4Li-ion 18650 Battery Holder ၏ 4. Product Details
PC pin အသေးစိတ်နှင့်4Li-ion 18650 ဘက်ထရီ Holder:
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: PC pin များနှင့်4Li-ion 18650 Battery Holder
PC pin များနှင့်4Li-ion 18650 Battery Holder ၏ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း ၅
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့် PC pin များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Li-ion 18650 Battery Holder ၄ လုံး
၆။ Li-ion 18650 Battery Holder ကို PC pin များဖြင့်ထုပ်ပိုး။ ပို့ဆောင်ခြင်း
PC pin များနှင့်4Li-ion 18650 Battery Holder ၏ FAQ ၇ ခု
ကျွန်ုပ်တို့သည် PC pin များထုတ်လုပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်4Li-ion 18650 Battery Holder တွင်ရှိနေခဲ့သည်၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းလုပ်ငန်း ၁၀၀ အတွက်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ဖောက်သည်များစွာသည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်နမူနာပုံစံများကို PC pin များဖြင့်4Li-ion 18650 Battery Holder အတွက်အခမဲ့နမူနာများရနိုင်သည်။
hot Tags:: PC Pins များပါ ၀ င်သော Li-ion 18650 ဘက်ထရီ Holder ၄ လုံး၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်ယူ၊ စိတ်ကြိုက် စျေးနှုန်းစာရင်း၊ ကိုးကားချက်၊ CE၊ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းအားကောင်း၊ အဆင့်မြင့်